20ka Soosaar ee Muusiga ah ee ugu Mushaharsan Adduunka. - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn 20ka Soosaar ee Muusiga ah ee ugu Mushaharsan Adduunka.
Ahaanshaha soo saaraha muusikadu waa shaqo riyo ah oo badan. Soosaarayaasha muusikadu waa xirfadlayaal ka mas'uul ah qaabaynta codka heesaha muusiga ee gaarka ah iyo hagida aragtida guud ee albamka.
Muusigu laftiisu waa warshad, markaa barashada ganacsiga muusiggu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah samaynta soo saaraha. Haddii aad xiisaynayso inaad noqoto muusig soo saare, ama aad si fudud u rabto inaad ogaato dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato wax soo saarayaasha muusigga ugu mushaharka badan, markaa maqaalkani adigaa iska leh. Sii wad akhriska.
Soo saarista muusikadu ma tahay xirfad cajiib ah?
Haddii aad leedahay dareen muusig; Haddii aad si joogto ah u walaaqdo oo aad wax uga beddesho garaacyada iyo muusigga, waxaa laga yaabaa inaad runtii fursad fiican u hesho inaad ka samayso xirfad ku habboon wax soo saarka muusikada.
Soo saaraha muusiga casriga ah wuxuu mas'uul ka noqon karaa hawlo kala duwan, oo ay ku jiraan curinta muusigga, maaraynta fannaaniinta, shaqaaleysiinta fannaaniinta, isku-darka iyo habaynta heesta, iyo qayb kasta oo ka mid ah samaynta muusigga.
Dadaal, dadaal, aqoon, iyo isku xirnaan sax ah, waad sameyn kartaa. Hubi inaad dhab ahaantii diyaar u tahay inaad sameyso raadinta xirfadda. Ma rabtid inaad waqti ku lumiso inaad sameyso wax aadan rabin inaad sameyso.
Ahaanshaha soo saare muusik heersare ah ma dhacayso habeen, laakiin waxa ay samayn kartaa shaqo cajiib ah haddii ay tahay dareenkaaga oo aad si fiican u barato.
Soosaarayaasha Muusigga si fiican ma u helaan?
Ahaanshaha Soo-saare Muusikadu waxay noqon kartaa waqti-qaadasho iyo daal, laakiin abaal-marintu hubaal way ka miisaan badan tahay kharashka.
Marka loo eego PayScale, soo saarayaasha muusikada celceliska mushaharka waa ugu yaraan $50,986. Miisaanka mushaharka ee ay ku taxan yihiin ayaa u dhexeeya dhamaadka-hoose ee $29,000 ilaa dhamaadka-sare ee $99,000.
Sidee Muusik Soo Saare Loo Qaadaa?
Soo saare muusik ahaan, sida aad mushahar ku heli lahayd waxay ku xidhan tahay heshiiska u dhexeeya adiga iyo loo-shaqeeyahaaga. Waxyaabo badan ayaa isu yimaada si loo go'aamiyo inta ay ku siinayso.
Khibradaada soo-saare muusig ahaan, heesaha aad ku shaqayn lahayd iyo tirada heesaha la duubayo ayaa dhammaantood ah qodobbada go'aamiya.
Soo saare muusig ahaan, adiga iyo loo-shaqeeyahaagu waxa kale oo aad go'aansan kartaan haddii ay ku siinayso royalties hees kasta iyo boqolleyda mid kasta.
Rikoorka royalty ee soo saaraha muusiggu inta badan waa inta u dhaxaysa 3% iyo 4% ee qiimaha iibka rikoodhada, ama 20% ilaa 25% royalties-ka fanaanka.
Maxay sameeyaan Soosaarayaasha Muusigga?
Soo saare muusik wuxuu caawiyaa fannaaniinta ku jira diiwaanka istuudiyaha oo uu abuuro muusik dhawaqyo xirfad leh. Waxay la shaqeeyaan fanaaniinta si ay u horumariyaan cod adag oo ay dareemaan duubista muusigooda.
Waxa kale oo laga yaabaa inuu soo jeediyo fikrado farshaxan iyo talooyin ku saabsan habaynta qoraalka. Asal ahaan, soo saaraha muusiggu wuxuu dhex maraa heeso si uu u helo fikrado habayn.
Soo saare muusik ahaan, waa shaqadaada inaad dhex marto heesaha oo aad hesho meelaha ay qaybaha qalabku isku dhacaan. Waa inaad sidoo kale isku darsataa muusik- hagaajinta mugga iyo saamaynta raad kasta oo aad soo saartaa isku dhafka stereo.
Intee in le'eg ayay Sameeyaan Soosaarayaasha Muusigga?
Guud ahaan, waxaa la dhigay in soo saarayaasha muusiggu ay sameeyaan ku dhawaad ​​$37,000. Qadarka aad kasban karto waxay kuxirantahay awoodaada, kartidaada, khibradaada iyo shirkada aad ka shaqeyso.
Qaar badan ayaa sidoo kale aqbalaya noocyo kale oo magdhow ah, sida adeeg beddelashada. Soosaarayaal badan oo muusik ah ayaa ku nuuxnuuxsaday in dakhligu isbedbeddeli karo, shaqadu waxay ku saabsan tahay ku qanacsanaanta muujinta fanka iyo jacaylka muusiga ee lacag ka badan.
Sidee loo noqdaa soo saare muusig?
Waxaa jira siyaabo badan oo aad ku noqon karto soo saare muusig. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad ku sii wadato xirfad ahaan soo saare muusig, waxaa jira tillaabooyin gaar ah oo aad qaadi karto. Halkan waxaa ah dhowr-
Tabobar dhegahaaga - Tani waxay si fudud uga dhigan tahay inaad awood u leedahay inaad tixgeliso waxa ka dhigaya isbeddellada muusiga ee caanka ah ama mugdiga ah, iyo waxa ka dhigaya noocyada kala duwan iyo tayada muusigooda mid gaar ah. Baro sida fanaaniintu u isticmaalaan qalabkooda muusiga, sida wax loo garaaco, wada noolaanshaha iyo wakhtiga. Waxaad isku qori kartaa koorsada muusikada si ay kaaga caawiso inaad bilawdo xirfadan. Xitaa haddii aad si fudud wax ugu raaxaysato, u mayl dheerad ah si aad u fahanto waxa go'aannada wax soo saarka muusiga la samaynayo, sababta loo sameeyay, iyo haddii ay doorashadu shaqaynayso.
Baro Qalab- Si gaar ah uguma fiicnaan kartid xirfadda soo saare muusig haddii aadan aqoon sida loo isticmaalo aaladda. Barashada sida loo ciyaaro dhowr ka mid ah heesaha aad jeceshahay waa hab wax ku ool ah oo lagu barto fikradda muusiga sida horumarka chord. Xirfaddaani aad bay muhiim u tahay maadaama ay ku caawin doonto inta lagu jiro habka hal-abuurka si aad u duubto codkaaga adigoo horumarinaya fikradaha.
Hel Qalabka Maqalka Dijital ah - Farsamada ayaa u fududaysay qof kasta oo leh wax soo saarka muusigga kombiyuutarka. Waxaad soo dejisan kartaa Digital Audio Workstation si ay naftooda ugu baraan software-ka loo isticmaalo duubista iyo soo saarista muusiga.
Hayso meel wax soo saar iyo duubis ah- Meel u heellan samaynta muusika waxay kaa caawin kartaa inaad noqoto mid hal abuur leh oo waxay ka dhigi kartaa fanaaniinta inay aad u xiiseeyaan iskaashiga. Waxaad ku bilaabi kartaa qalabka lagama maarmaanka ah sida kombuyuutar leh DAW, santuuqa dhawaaqa, makarafoonka qolka aamusan oo waqti ka dib waxaad geli kartaa dhisitaanka istuudiyahaaga.
Baro sida loo isticmaalo Mixer-ka-muusiga soo saare ahaan, isku-darka maqalku waa qaybta ugu muhiimsan ee tignoolajiyada soo saaraha muusikadu u baahan yahay. Iyada, waxaad ku beddeli kartaa mugga iyo saamaynta dhawaaqyada shakhsi ahaaneed si aad u abuurto halabuurkaaga muusiga. Waxa kale oo aad iska qori kartaa koorsada soo saarista muusiga si aad u barato xirfadaha isku dhafka maqalka ee macalin xirfadle ah.
Shabakadda Fanaaniinta- Markaad la xiriirto fanaaniinta muusiga, waxaad ku horumarin kartaa xirfadahaaga ku celcelin. Kor u qaadida shaqadaada munaasabadaha tooska ah iyo khadka tooska ah waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad dadka kugu soo jiidato iskaashiga iyo fursadaha ganacsi.
Tixgeli Shahaado xagga Muusiga ah- Aaditaanka dugsiga si loo baro sida loo noqdo soo-saare muusiko wanaagsan waa bood wanaagsan. Waxay ku bari lahaayeen sida loo isticmaalo tignoolajiyada loo isticmaalo abuurista muusiga, isku dhafka iyo muusigga sare, waxayna sidoo kale noqon kartaa fursad qaali ah oo aad kula kulanto dadka warshadaha ku jira. Waxaad sidoo kale iska qori kartaa koorso online ah oo badankoodu mar walba waa bilaash.
Abuur Muusiga - Waa maxay soo saaraha muusiga oo aan samayn karin muusig. Waxaad noqon doontaa mid aan dhammaystirnayn. Abuuritaanka muusiga waxaa ku jiri kara soo saarista garaaca fannaaniinta kale, samaynta isku-dhafka heesaha iyo dhawaaqyada jira, ama xitaa samaynta muusigga asalka ah.
La imow laxanka Qabta iyo Hook- Qabashadu waa rif gaaban ama dhawaaq muusik oo ka dhiga hees soo jiidasho leh. Haddi aad ku ciyaarayso qalab ama aad garaacdo adiga oo isticmaalaya barnaamijka dhijitaalka ah, ku billow qorista hees adiga oo la imanaya jillaab ama qaafiyad aad isticmaali karto si aad u hagto inta ka hadhay hal-abuurkaaga heesta.
Waa kuwee 20-ka Soosaar ee Fanka ugu Lacag-bixinta Badan Adduunka?
Soosaarayaasha muusikadu run ahaantii aad bay u sarreeyaan waxa ay ku biiriyeen muusikadda. Halkan waxaa ah 20-ka soo saarayaasha muusiga ee ugu mushaarka badan adduunka.
Dr. Dre- Andre Romello Young, oo xirfad ahaan loo yaqaan Dr. Dre, waa heesaa Mareykan ah rapper, injineer maqal, soo saare duubis ah, iyo ganacsade.
Laga bilaabo 2020, waxa uu haystaa qiyaastii qiimihiisu yahay $800 milyan. Dr. Dre waa kan ugu horreeya ee liiska soo saarayaasha fanka ee ugu qanisan sanadka 2021 heer caalami.
Isagu waa maamulaha shirkadda Beats Electronics iyo aasaasaha madadaalada ka dib. Wuxuu Apple kaga iibiyay Beats Electronics malaayiin dollar.
Rick Rubin waa aasaasaha Def Jam Records kaas oo JayZ madax ka ahaa ka hor inta uusan la bixin saaxiibkiis Russell Simmons. Waxa uu sidoo kale ahaa madaxweyne ku-xigeenka Columbia Records.
Hantidiisa waxa lagu qiyaasay 400 oo milyan oo doolar. Waa inuu ku ammaanaa soo saarista hits badan oo ka mid ah fanaaniinta sida JayZ, Kanye West iyo Adele.
Berry Gordy III, oo xirfad ahaan loo yaqaan Berry Gordy Jr., waa fulinta rikoorka Mareykanka ah, soo saare rikoor ah, abwaan qoraa, filim soo saare iyo soo saare telefishan.
Waxa aad loogu yaqaanaa aasaasihii summada rikoodhka Motown iyo kaabayaasheeda, kaas oo ahaa ganacsiga Afrika-Maraykanka ah ee ugu dakhliga badan tobannaan sano.
Wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee bilaabay oo u suuqgeeyay muusig Afrikaan-Maraykan ah adduunka oo dhan. Hantidiisa waxa lagu qiyaasaa $345 milyan.
Karl Martin Sandberg oo xirfad ahaan loo yaqaan Max Martin, waa soo saaraha rikoorka Iswiidhishka, heesaaga, iyo mid ka mid ah fannaaniinta ugu mushaarka badan ka hor inta uusan shaqada ka fariisan.
Waxa uu caan noqday dabayaaqadii 1990-meeyadii isaga oo sameeyay heeso taxane ah oo la garaacay sida Britney Spears's “...Baby One More Time” (1998), Wiilasha Backstreet “I Want It That Way” (1999), iyo NSYNC's “It's Gonna Be Aniga” (2000).
Max Martin waxa uu qoray oo wada qoray 22 "Billboard's Hot 100 Songs", kuwaas oo intooda badan uu soo saaray ama wada sameeyay. Hantidiisa waxa lagu qiyaasaa $260 milyan.
Neptun-yadu waa laba-soo-saar Maraykan ah oo ka kooban Pharrell Williams iyo Chad Hugo, oo laga sameeyay Virginia Beach, Virginia 1990kii.
Williams inta badan waxay bixisaa codad dheeri ah oo ku saabsan diiwaanada waxayna ka soo muuqataa fiidiyowyada muusikada labada, halka Hugo uu joogo gadaashiisa muuqaalka. Waxay urursadeen hanti dhan $155 milyan.
Nile Gregory Rodgers Jr. waa gitaarste Mareykan ah, heesaa-heeseed, soo saare rikoor, iyo qabanqaabiye.
Aasaasihii Chic, Rodgers waxa uu qoray, soo saaray, oo ku sameeyay albamooyin iibiyay in ka badan 500 milyan oo unug iyo 75 milyan oo kali ah oo adduunka oo dhan ah. Hantidiisu waa ilaa 100 milyan oo doolar.
George Martin, CBE wuxuu ahaa soo saaraha Ingiriisida, qabanqaabiyaha, laxanka, kaariyaha, injineer maqalka, iyo muusikaste. Intii uu ku guda jiray xirfadiisa waxa uu soo saaray 30-nambar-koowaad ee Boqortooyada Ingiriiska iyo 23-nambar-koowaad ee Maraykanka.
Waxa uu sidoo kale dhowr door oo fulineed oo sare ka soo qabtay shirkadaha warbaahinta wuxuuna gacan ka geystay arrimo badan oo samafal ah, oo ay ku jiraan shaqadiisa The Prince's Trust iyo jasiiradda Caribbean ee Montserrat.
Waxa uu ahaa soo saaraha rikoorka caanka ah kaas oo qaabeeyay sharaxaadda shaqada ee macnaha dhabta ah ee cinwaanka. Doorkiisa xubinta 5-aad ee Beatles waa halyeey.
Tan waxaa lagu muujiyey Grammys badan, Brits iyo abaal-marinaha guulaha noloshiisa ee uu ku guuleystay. Hantidiisu waa qiyaastii $65 milyan.
#7. Finneas O'Connell
Finneas Baird O'Connell oo inta badan loo yaqaan magaciisa koowaad, waa heesaa-heeseed Mareykan ah, soo saare rikoor ah, injineer maqal ah, iyo jilaa. Waxa uu u qoray oo u soo saaray muusig fanaaniin kala duwan, oo ay ku jirto walaashii, Billie Eilish. Hantidiisa sanadka 2021 waa lacag la yaab leh oo dhan $20 milyan.
Linda waxay heshay fasaxeeda weyn ee 90-meeyadii, maxaa jira? By Afar Aan-Blondes. Shaqadeeda muusig-soo-saare ayaa madoobaatay, taasoo ka dhigtay iyada, muran la'aan, soo saaraha ugu caansan meeraha.
La yaab maaha in ay hadda tahay milyaneer badan. Hadda waxay haysataa hanti dhan $18 milyan.
Imogen Heap waa heesaa-heeseed Ingiriisi la ammaano, injineer & soo saare iyo injineer maqal. Ilmo ahaan, qof ayaa si heersare ah ugu tababaray biyaano, cello iyo clarinet.
Ka dib waxa ay noqotay gitaaristaha iyo durbaanka iskeed wax u bara. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale hore u qaadatay kombuyuutarrada Atari ee wax soo saarka muusikada. Markay 18 jir ahayd waxay la saxeexatay Almo Sounds oo ay sii daysay albamkeedii ugu horreeyay - 'iMegaphone' - oo uu soo saaray wada-shaqeeye muddada-dheer Guy Sigsworth. Waxay haysataa hanti dhan ilaa 10 milyan oo doolar.
MNEK waa soo saare muusig oo aad u qurux badan. Iftiimintiisa ayaa siisay guul hore. Hantidiisa sanadka 2021 waa ku dhawaad ​​$5 milyan. Waxa uu u soo saaray qaar ka mid ah shaqooyin aad u wanaagsan Duo Lipa, Christina Aguilera, Selena Gomez. MNEK waxay ka timid Koonfurta London.
Sylvia Massey waa fanaanad Mareykan ah oo caan ah oo soo saartay rikoorka muusiga. Sidoo kale waa qoraa iyo injineer. Waxay haysataa qiime dhan $2 milyan waxayna ku jirtaa mid ka mid ah soo saarayaasha muusiga ugu sarreeya.
Markii hore, waxay ahayd soo saaraha koox dhagax majaajillo ah oo la yiraahdo Green Jelly.
David guulo hore ayuu ka gaaray xirfadiisa. Waxa uu sii waday inuu soo saaro hits adduunka oo dhan sida "Qalbigeyga qalbigeyga" ee Toni Braxton iyo "Sababta aad i Jeceshahay" waxaa ku heesay Celine Dion. Hantidiisu hadda waxay ku dhowdahay $150 milyan.
Quincy Jones- Halyey run ah, rikoodhkan soo saaraha ah, gabayada, curiyaha, habeeyaha iyo qalab-yaqaanka waa machad ka tirsan warshadaha muusiga ee Maraykanka.
Waxa uu soo saaray qaar ka mid ah fanaaniinta ugu caansan iyo kuwa ugu wanaagsan adduunka, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah albamka iibka ugu wanaagsan ee abid, sida Michael Jackson's Off Wall (1979), Thriller (1982), iyo Bad (1987).
Fannaaniinta kale ee caanka ah adduunka Jones ayaa soo saaray oo u qoray waxaa ka mid ah Frank Sinatra iyo Ray Charles. Hantidiisu waa ilaa 500 milyan.
Kenneth Brian Edmonds, oo si fiican loogu yaqaan masraxa magaciisa Babyface, waa heesaa Mareykan ah, heesaa, iyo soo saare rikoor ah. Waxa uu qoray oo soo saaray in ka badan 26 lambar-kow R&B hits intii uu ku jiray xirfadiisa oo dhan wuxuuna ku guuleystay 12 Abaalmarinnada Grammy.
Waxa uu ku jiray lambarka 20 ee NME's 50 ee liiska Soosaarayaasha ugu Wanaagsan abid oo hadda waa mid ka mid ah soosaarayaasha muusikada ugu mushaarka badan adduunka. Hantidiisu waa qiyaastii $200 milyan.
Burt Freeman Bacharach waa laxamiistaha Mareykanka, heesaa, soo saare rikoor ah.
In ka badan 1,000 farshaxan oo gaar ah ayaa diiwaangeliyay ku guulaysta Abaalmarinta Grammy lix jeer iyo ku guulaysta Abaalmarinta Akademiyada saddex jeer. Hantidiisu hadda waa ku dhawaad ​​160 milyan oo doolar.
Harvey Phillips Spector wuxuu ahaa soo saare rikoor Mareykan ah, muusikiiste, iyo gabayaa caan ku ahaa dhaqankiisa duubista hal-abuurka leh iyo hal-abuurnimadiisa 1960-meeyadii, waxaa xigay tobanaan sano kadib labadiisii ​​tijaabo iyo xukun dil ah 2000-meeyadii.
Hantidiisu hadda waa 30 milyan oo doolar.
Ka dib markii xoogaa guulo laga gaaray 1980-meeyadii iyo 1990-meeyadii sida soo saaraha rikoorka, indha-indheeye karti iyo lataliye ee warshadaha muusiga UK, Cowell waxa uu caan ku noqday dadweynaha 2001dii.
Wuxuu u yimid garsoore ahaan Pop Idol, bandhig ay isaga iyo abuureheeda Simon Fuller ay si guul leh ugu dhejiyeen ITV Controller of Entertainment Claudia Rosencrantz.
Hadda waxa uu ku jiraa mid ka mid ah soo saarayaasha muusiga ugu mushaharka badan waxana uu haystaa qiimihiisu dhan $500 milyan.
Robert John “Mutt” Lange waa soo saaraha rikoorka Koonfur Afrika iyo heesaha. Waxa uu caan ku yahay shaqadiisa istuudiyaha, isaga oo soo saaray qaar badan oo ka mid ah albamada ugu caansan ee dhagaxa.
Wuxuu u soo saaray albamooyin, ama haddii kale uu la shaqeeyay, fannaaniinta sida AC/DC, Def Leppard, The Michael Stanley Band, The Boomtown Rats, Ajaanibka, Michael Bolton, The Cars, Bryan Adams, Huey Lewis, iyo kuwo kale. Hantidiisu waa qiyaastii $220 milyan.
Timothy Zachery Mosley oo xirfad ahaan loo yaqaan Timbaland, waa muusikiiste Mareykan ah, soo saare rikoor ah, heesaa, heesaa, iyo fulinta duubista.
Waxa uu helay ammaan baahsan shaqadiisa wax-soo-saarka hal-abuurka leh iyo qaab qaafiyad "tuttering" oo gaar ah. Hantidiisu hadda waa $85 milyan.
Ma noqon karaa soo saare muusig guriga?
Barashada tignoolajiyada iyo soo saarista muusikadaada waxay qaadanaysaa wakhti, dadaal, iyo ku celcelin, laakiin haddii aad runtii xiisaynayso oo aad rabto inaad wax barato, waad awoodaa inaad sameyso.
Sidee u fududahay inaad noqoto muusig soo saare?
Tani waxay inta badan ku xiran tahay waqtiga aad geliso. Alan Walker waxa uu sheegay in ay ku qaadatay in ka badan hal sano si uu u fahmo wax soo saarka muusiga.
Sideen ku noqon karaa soo saare muusig oo guuleysta?
Tababarku waa furaha. Inta badan waxaa la sheegaa in dhaqanku uu kaamil yahay.
Miyaan u baahanahay shahaadooyin si aan u noqdo soo saaraha muusiga ee guuleysta?
Maya. Isku day in aad diirada saarto isku xirka. Xidhiidhada badan ee aad leedahay, way kuu fududaanaysaa inaad shaqo hesho. Si kastaba ha ahaatee shahaado ayaa ku caawin karta.
Ma qaadan karaa koorsooyinka wax soo saarka muusiga onlaynka ah?
Haa Waxaad isku dayi kartaa inaad ka daawato YouTube, Shaqooyinka mashquulka ah ee garaaca kanaalka ama FL School.
In kasta oo ay muhiim tahay doorka iyo xaqiiqda ah in soo saaraha muusiga ee ugu mushaharka badan uu ka ciyaari karo guusha rikoorka, inta badan waxay ahaanayaan kuwo aan la garanayn dadweynaha guud.
Wax ku biirintooda inta badan waa la iska indhatiraa. Taariikh ahaan, door-soo-saaruhu waxa uu ahaa in uu xaqiijiyo kartida diiwaanka. Caadi ahaan adiga oo sida ugu wanaagsan uga faa'iideysanaya fannaanka. Si kastaba ha ahaatee, waagii soo saaraha superstar-ka ayaa aad noogu badan.
Soosaarayaasha Muusigga ugu qanisan
Talo-xirfadeed; Horumarinta Xirfadda/sida loo noqdo soo saare muusig
11 Madal Oo Lacag Laguugu Siin Karo Si Loogu Tijaabiyo Alaabta Guriga 2021
Markii aan u sheegay saaxiibkay in mid ka mid ah xamaasadayda dhinaceeda uu samaynayo alaabo tijaabin lacag ah, waxay moodday…
Dadka leh sumcad adag, iibinta raad -raacyada ayaa faa iido weyn u leh. Markaad ka fekereyso sameynta lacag dheeri ah, badanaa waxay ku lug leedahay allabaryo.
Funaanadaha Naqshadaynta ee La Iibiyo | 13 Shirkadood oo lacag badan ku siiya 2021
Haddii dhimbiilahaaga mala -awaalka ahi mar walba soo baxaan, oo aad noqoto farshaxan aad u wanaagsan, waxaa jira…
Waxaan ka dhashay qoys macallimiin ah. Waqti ka dib, waxaan u imid inaan fahmo hal shay: kooda…